အို – မရဏ | ZAYYA
← ထိုထိုသော နေ့များ
ဦးအောင်ဆန်းကို တွေ့ချင်လွန်းလို့ →
အို – မရဏ
တစ်နေရာတွင် Paul Carus ၏ The Truth ကဗျာကို “သစ္စာဟူသည်” ဆိုသော အမည်ဖြင့် ကျနော် ဘာသာပြန်ဆိုပြီးပါပြီ။ ဆရာ ပါရဂူ နှင့် ဆက်နွယ်၍ ဖြစ်သည်။ ယခု Paul Carus ၏ ကဗျာ တစ်ပုဒ် ပင် ဖြစ်သော Death ( မရဏဟူသည် ) ကို ( အစအဆုံး မဟုတ်၊ ရှေ့ဦးပိုင်း ကွက်၍ ) ဘာသာပြန်ဆို ကြည့်ပါသည်။ ဆီလျော် နားလည်သလို ပြန်ဆိုမှု ဖြစ်သောကြောင့် အမှားအယွင်း ရှိက ထောက်ပြနိုင်ပါရန် မူရင်း ကိုပါ ပူးတွဲ ထည့်သွင်း ပေးလိုက်သည်။
အို – မရဏ ( သင်သည် ကျွန်ုပ်၏ အဆွေ )
သေခြင်းတရား ဖြစ်သော သင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ ဘဝ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်သန်မှုကို ပြီးပြည့်စုံသွား စေ၏။
သင့်အတွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေရရှိမည် ဖြစ်သည်။
အလားတူ သင့်အတွင်း၌ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရမှု ဒုက္ခကို ရှာတွေ့ရ လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဇောစိတ်ထကြွသမျှ၊ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သမျှတို့သည် အတိတ်တို့ ဖြစ်ကုန်ကြမည်။
အသင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကောင်းဆုံး၊ သစ္စာ အရှိဆုံး အဆွေခင်ပွန်း ဖြစ်တော့သည်။
အသင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အနာဘယ ရောဂါ အပေါင်းတို့ အတွက်
ဩသဓ ဆေးစွမ်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားပေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်သန် နေဆဲခဏ
သင့်မျက်နှာထားကြောင့် ကြောက်ရ ၊ ရှားရ ကုန်၏။
သင်၏ အေးစက် တည်ကြည်သော အသွင်အပြင်ကြောင့်
အံ့ဩ တိမ်းမူး ကြရကုန်၏။
သင့်အား အဆိုးရွားဆုံး ရန်သူတော် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြကုန်၏။
ပျက်စီးခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ ကြမ္မာဆိုးနှင့် ကြောက်လန့်ခြင်း တရားကို
သင့်ကို ယုံကြည်ကြသည် ဖြစ်သောကြောင့်
သင်၏ ရုပ်ဆင်း အမှန်ကို မသိကြ မမြင်ကြတော့။
ရောဂါဘယ တို့၏ စင်စစ် အိမ်ရှင် လက်သည်သည်
သင်၏ ရှေ့တွင် ဖြစ်ပျက်ပြီးချေပြီ။
ယင်းကို ၎င်းတို့ မမြင်တတ်ကြတော့။
အမှန်ဆိုသည်မှာ ရှင်သန်နေမှု ဘဝသည်သာ
ခံစားရသမျှ ဖဿ၊ ဝေဒနာတို့ ပြည့်နှက်နေကြရ၏။
ယင်းကို သူတို့ မမြင်နိုင်ကြတော့ – ။
အို မရဏ၊ နာမကျန်းသူ၊ ဒုက္ခသည် အပေါင်းတို့၏ ခိုကိုးရာ အရှင်။
သင်သည် ရောဂါဘယ တို့မှ လွတ်မြောက် စေတတ်၏။
ဒုက္ခ၊ ဒေါမနဿ၊ ဥပါယာသ တို့မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ကို
ထာဝရ အေးငြိမ်းမှုကို အချိုမြိန်ဆုံး ဖြည့်စွမ်းပေးတတ်၏။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အသင့်ကို အဆွေ ဟု ခေါ်ပါမည်။
သင်၏ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာတို့အား ကောင်းချီးပေးပါမည်။
စင်စစ် သေခြင်းတရားသည် ရှင်သန်မွေးဖွားခြင်းတရား၏ အမွှာ သာ ဖြစ်သည်။
အတိတ် ကာလကို ပြည်ဖုံးကားချ၍
သစ်လွင်သော ဘဝ ကန့်လန့်ကာကို ဖွင့်ချ ဖန်ဆင်းပေးပေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှင်သန်သမျှ သက်ရှိအားလုံးသည်
အစဉ်မပြတ် စီးဆင်းနေသော တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်းသာ ဖြစ်၍
သေဆုံးခြင်း မရဏ နှင့် မွေးဖွားခြင်း ဇာတိ တို့သည်
တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဘဝအလျဉ် တို့ကို ဖြတ်ပိုင်း ထုဆစ် ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ကြ၏။
ဤသို့ဖြင့် ဘဝသည် ပြန်လည် သစ်လွင်လာ၊ တောက်ပလာ ရပေတော့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘဝအား ဖွဲ့တည်ကြကုန်သော နေ့ရက်များကို အမှောင်ချ၍
မထိမတွေ့ရသေးသော မျှော်မှန်းချက်များ သလ္လာစီကာ
ရှင်သန်မှု ဘဝအတွင်း တိုးဝင်တတ်ကြ၏။
အစဉ်အလာ အဆက်ဆက် ရှိခဲ့သော အတိတ်တို့ ဖြင့်
ပြန့်ကား လာသော ကျွန်ုပ်တို့ ဝိညာဉ်ခန္ဓာမှ အမြိုက် အသီးတို့ကို ဆုပ်ကိုင်ထား တတ်ကြ၏။
ဤသို့ဖြင့် ရှေ့ရှေ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကို ဖန်တီး တည်ဆောက်ကြ၏။
ရှေ့ရှေ့ ဘိုးဘေး ဘဝတို့သည်
ကျွန်ုပ်တို့ အတွင်း ခိုဝင်၍
ကျွန်ုပ်တို့က ရှေ့ရှေ့ မျိုးဆက်တို့ကို စီးမျော ကြ၏။
ထို့ကြောင့် အဲလုစနီယန် ဒဏ္ဍာရီထဲမှ ကဲ့သို့
ဘဝမီးအိမ်ကို တစ်လက်မှ တစ်လက်
ဆင့်ကမ်း ကူးပြောင်းကြ၏ ။
မြင့်မြတ်သန့်စင်သော ဝိညာဉ်ခန္ဓာ အစဉ်၏ သင်္ကေတ ဖြစ်သည့်
အကြင် မီးညွှန့် မီးတောက်၏ အဆက်မပြတ် ထွန်းတောက်နေစေခြင်း အလို့ငှာ
အဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက် နေကြစေဖို့ကား လိုအပ်လှပေ၏။
Eleusinean Mysteries = ခေါမ အေသင် ဒဏ္ဍာရီ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏ အကြောင်းကို အောက်ပါ အတိုင်း တနေရာတွင် ဆိုထားပါသည်။ This Athenian religious festival was held in honor of the grain and fertility goddess Demeter, her name is purely Greek, meaning “spelt mother” (spelt isahardy variety of wheat.) The cult held this important festival at the town of Eleusis, 15 miles northwest of Athens, in the heart of the wheat and barley growing region.
Filed under mood, philosophy, poem, wisdom Tagged with anxieties, aspiration, awe, believe, best, brook, burning, consummation, countenance, creature, cure, death, disease, earth, Eleusinean, existence, expection, fear, feature, flow, fresh, friend, grim, hand, host, ill, individual, life, Mysteries, oblivious, pain, Paragu, past, Paul Carus, shrink, spirit, struggle, truth, twin, unfortunate, us, virgin, woe, worst